सडक र कृषिक्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिएका छौं
वीरबल राई प्रमुख, षडानन्द नगरपालिका
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा विकास गतिविधि बढेका छन् । नगरको पूर्वाधार विकासमा योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेको नगर प्रमुख वीरबल राई बताउँछन् । नगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, नगरका विकास गतिविधि, समस्या, चुनौती र आगामी योजनाबारे आर्थिक अभियानका भोजपुर संवाददाता गणेश विष्टले नगर प्रमुख राईसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं नगर प्रमुख भएर आएपछि भएका विकासका काम के के हुन् ?
जिल्लाका ९ ओटा स्थानीय तहमध्ये यो नगरपालिकालाई नमूना स्थानीय तह बनाउने उद्देश्यले काम गरेका छौं । सडक निर्माण भए पनि नगरपालिकालाई अन्य जिल्लासँग जोड्न पुल नहुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ । त्यसको समाधानका लागि सतीघाटमा फेरी निर्माण शुरू गरिएको छ । सबै वडालाई नगरपालिकासँग जोड्न कृषि सडकको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नरपालिकामा सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिने इन्टरनेटको व्यवस्था मिलाएका छौं । पर्यटन क्षत्रको विकासका लागि मैयुङडाँडाँको साउने, सतीघाटमा सती ग्रीन पार्क, योगमाया समाधिस्थल, सती प्रथाको अन्त्य गरेको ठाउँ मजुवा बेँशी लगायत ठाउँको डीपीआर तयार गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जिल्लामै पहिलो पटक उच्च शिक्षा निःशुल्क गरिएको छ । बालगुरु षडानन्दले १९३२ सालमा स्थापित नेपालको पहिलो संस्कृत पाठशालाको संरक्षणका लागि काम गरेका छौं ।
नगरपालिकामा गत आवमा पूर्वाधार विकासमा के कस्ता काम गर्नुभयो ?
गत आर्थिक वर्षमा सडक, विद्युत् र कृषिक्षेत्रको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिएका थियौं । त्यसमा नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारको बजेटबाट भोजपुर सदरमुकामसँग जोड्ने बाटोको केही केही अप्ठ्यारो ठाउँमा स्तरोन्नति भएको छ । नगरपालिकाभर ‘एक घर, एक धारो’ पु¥याउने अभियान अन्तर्गत पानीका मुहानहरूको सर्वेक्षण गरिएको छ । वडा नं १ देखि वडा नं १४ सम्मलाई नगरपालिकासँग जोड्ने सडक निर्माण थालेका छौं ।
सतीघाट–दिङ्ला जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको अवस्था कस्तो छ ?
यो सडक खण्डको काम अगाडि बढेको छ । यसको टेन्डर समेत गरिसकेका छौं । रू. ४३ करोडमा सडक पक्की गर्ने योजना सञ्चालन भएको छ । नगरपालिकालाई अन्य जिल्लासँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो पर्ने भएकाले यो सडक प्राथमिकतामा छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि नगरले कसरी काम गर्दै छ ?
यो नेपालकै पहिलो संस्कृत पाठशाला खुलेको नगरपालिका हो । नगरपालिकामा शिक्षाको छुट्टै इतिहास छ । हामीले उच्च शिक्षा निःशुल्क पढाइ हुने व्यवस्था गरेका छौं । केही विद्यालयको मावि तहमा प्राविधिक शिक्षाको शुरुआत गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा डाक्टर नआउने, आए पनि लामो समय नबस्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टरको अभाव छ । यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिएको छ । रोजगारीको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण काम गरेका छौं । नगरपालिकाका १४ ओटै वडाबाट ५० जनाको दरले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी ७ सय जनालाई रोजगारी दिने योजना ल्याएका छौं । हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा बाहेक सबै विकास निर्माणमा स्थानीय जनशक्ति प्रयोग गर्ने नीति लिएका छौं ।
विकास बजेट कार्यान्वयनका समस्या र चुनौती के के छन् ?
विकास बजेटमा थुप्रै चुनौतीहरू छन् । बजेट निर्माणदेखि नै विवाद हुने गर्दछ । त्यही विवादका कारण तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन केही समस्या भयो । तर पनि बजेट फ्रिज नहोस् भनेर पटक पटक छलफल गर्दै त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौं ।
नगर क्षेत्रको बजार विकास तथा व्यवस्थापनका लागि कसरी काम अगाडि बढेका छन् ?
नगरलाई व्यवस्थित बनाउन तथा दिगो शहरी विकासका लागि नयाँ बन्ने घरहरूमा नगरपालिकाको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिका तथा सम्पूर्ण वडामा रहेका साना साना बजारमा सडक बत्ती राखिएका छन् । सफा शहर निर्माणका लागि बजारबाट निस्कने फोहोर तथा ढलको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
देशभरकै स्थानीय तहले समयमा विकास निर्माण पूरा गर्दैन । यो नगरपालिकाले कसरी काम गर्दै छ ?
विगतका वर्षमा कर्मचारी अभावले समयमा काम सक्न समस्या भएको हो । यस वर्ष फागुन मसान्तसम्म सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम सक्ने उद्देश्यले भदौदेखि नै योजना सम्झौताको काम थालिएको छ । केही ठूला योजनाहरूमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण समयमै योजना सम्पन्न हुन सकेन । त्यसप्रति हामी सचेत छौं । अब भने समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।
जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वका कारण नगपालिकाको विकासमा समस्या छ भन्ने स्थानीयको गुनासो छ नि ?
यो कुरा सही हो । हामी जनप्रतिनिधिले आप्mनो हैसियत बुभ्mनुपर्छ । यसलाई नबुभ्mदा कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको छ, जस कारण कर्मचारीमा समेत नैराश्य आउने हँुदा काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
विद्युत् विस्तारको काममा अनियमितता भयो भन्ने गुनासोबारे के भन्नुहुन्छ ?
विद्युत् विस्तारको काम नसकीन बजेट निकासा गर्दा समस्या भएको हो । त्यसको मुद्दा अहिले अख्तियारमा परेको छ । यसबाट हामी सचेत भएका छौं । आगामी योजनाको अनुगमन गरेर मात्र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छु ।
नगरपालिकाका मुख्य प्राथमिकताका योजना के के छन् ?
हामीले योगमाया कोशी कोरिडोरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौं । उदयपुरको रानीटारबाट षडानन्द नगरपालिका हँुदै संखुवासभाको भ्याक्सिलासम्म यो कोरिडोर सञ्चालन हुनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारबाट १ करोड र नगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । यो कोरिडोर सञ्चालनमा आएपछि नगरपालिका तराईका जिल्लाहरूसँग जोडिने सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ, जसका लागि अन्य स्थानीय तहसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छौं । यस्तै सदरमुकामसम्म जोड्न उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणमा जोड दिएका छौं । यहाँको हावापानी तथा वातावरणको आधारमा पशुपालन, जडीबुटी खेती, अलैंची, फलपूmल तथा माछापालन व्यवसायलाई पनि प्राथामिकतामा राखिएको छ ।
आइक्यानको नियमन सोचेजस्तो भएन[२०७७ सावन, २०]
जनताको जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने काम नगरौं[२०७७ असार, २]
साधारणसभाको मिति यथाशीघ्र तोकिनुपर्छ[२०७७ जेठ, २३]
निर्माण सामग्रीको व्यापार व्यवसायलाई बेवास्ता गरियो[२०७७ जेठ, १३]
अल्पकालीन योजनाले टिकाउने र दीर्घकालीनले चलाउने नीति लिनु पर्दछ[२०७७ जेठ, ९]
तथ्यांकोवाच : लकडाउनमा प्रशस्त मात्रामा सुन्तला आयात
बढ्दो कोरोना संक्रमण : हवाई उडान तथा लामो दूरीको यातायात १५ दिनपछि सार्न प्रस्ताव
‘निर्माण सुचारु गर्न मंसिरसम्म रू. ६५ अर्ब पूँजी आवश्यक’
मासुको थोक मूल्य घटे पनि खुद्रा बजारमा मनपरी
५० अर्ब कोषको गृहकार्य शुरू